Shiinaha Hot dhalaali dhalaalka galaas accessoies Warshaddaha, CE, Soosaarayaasha - Tiknoolajiyadda Dhirta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Gawaarida dhalaaliya kululeeyaha marinnada
Mallaqeysaa Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Bamka Meter-ka Meter-ka Melt-ka wuxuu qaataa hal-lakab, naqshad soo-saar ah oo laba-xabbo ah, oo si madax-bannaan u xakamayn kara cadaadiska caagga, oo leh iska caabin xirasho sare iyo iska caabbinta daxalka. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa loo dhoofiyey in ka badan toban dal oo ku yaal ASEAN iyo EU, waxayna ku guuleysatay kalsoonida iyo taageerada macaamiisheena.
Module codsadaha kulul
Qalabkan waxaa loo isticmaalaa iyadoo lala socdo biiyaha si si sax ah loo xakameeyo qadarka xabagta laga saaray. Shirkaddu waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay cilmiga R&D, wax soo saarka, iibinta qalabka koollada iyo siinta talo farsamo macaamiisha. Waxay leedahay nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran oo cilmiyaysan. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan u dhoofinay wax soo saar in ka badan toban dal oo ku yaal ASEAN iyo EU, waxaan ku guuleysanay kalsoonida iyo taageerada macaamiisha.
Biiyaha kulul dareeraha kulul
Nalalka saxda ah ee la soo dhoofiyay ee Swiss-ka ah, birta aan caadiga ahayn ee Talyaanigu soo dhoofiyo, qalabka nozzles-ga ee saxda ah, ee loo isticmaalo kaabayaasha, waxay si sax ah u xakameyn karaan xaddiga xabagta marka la bixinayo xabagta dhalaalka kulul. Shirkaddu waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay cilmiga R&D, wax soo saarka, iibinta qalabka koollada iyo siinta talo farsamo macaamiisha. Waxay leedahay nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran oo cilmiyaysan. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan u dhoofinay wax soo saarkeena in ka badan toban dal oo ku yaal ASEAN iyo EU, waxaan ku guuleysanay kalsoonida iyo taageerada macaamiisheena.